သဝန်တိုလွန်းရင်လဲ ပူလောင်တတ်တာပဲ – Askstyle
ကိုကိုသာ ဘယ်​အချိန်​မျိူးမဆို ကျွန်​မ နာမည်​​လေးကိုသာ လှမ်း​ခေါ်လိုက်​ပါ။ ​ရောက်​​နေတဲ့​နေရာက​နေ ကိုကို့ ဆီလှည့်​ပြန်​လာမယ့်​ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​…. ဆိုတာ
ကိုကိုသာ ဘယ်​အချိန်​မျိူးမဆို ကျွန်​မ နာမည်​​လေးကိုသာ လှမ်း​ခေါ်လိုက်​ပါ။ ​ရောက်​​နေတဲ့​နေရာက​နေ ကိုကို့ ဆီလှည့်​ပြန်​လာမယ့်​ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​…. ဆိုတာ က်ိုကို …သိ​စေချင်​ လို့ … နိူးထတဲ့…
Single မိနျးကလေးတှအေတှကျ RS အကွံပေးခကျြ ၇ ခကျြ
စုံတှဲတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ လောကကွီးထဲမှာ single မိနျးကလေး တယောကျဖွဈရတာဟာ တကယျတော့ စိတျထဲ ကသိကအောကျ ဖွဈစရာကောငျးလှပါတယျ။ တခါတရံမှာ “ငါမြား ကံမကောငျးလို့ ဘယျသူမှမကွိုကျတာလား” လို့တောငျ…
သင်သူ့ကို လက်လွှတ်သင့်နေပီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အကြောင်းများ... သူများ ပြောင်းလဲလာမလား ဆိုပြီး စောင့်ကြည့်နေရင်း မပြောင်းလဲလာတော့ရင် သင် သူကို လက်လွှတ်သင့်နေပြီလား။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းမှန်း သိနေရက်နဲ့…